Ubuntu Cinnamon vs. I-Linux Mint, uKubuntu omtsha vs. KDE neon | Ubunlog
Kweli hlobo sibhale inqaku apho besichaze khona ukufana kunye numahluko phakathi kweKubuntu ne-KDE neon. Ngaba ziyinkqubo enye yokusebenza? Hayi, nangona ziphuhliswa ngabo. Okuphambili, sithetha ngenkqubo yokusebenza, kodwa ifilosofi yohlaziyo, phakathi kwezinye izinto, yenza ukuba kwahluke kakhulu ekusebenziseni enye okanye enye. Ngale ndlela, sinokuthi ukufana kunye numahluko phakathi kwe-Ubuntu Cinnamon (Remix) kunye neLinux Mint baphantse bayikopi yekhabhoni yeenkqubo zoLuntu ze KDE.
Kodwa kufuneka ucace gca malunga nento: Ubuntu Cinnamon yiprojekthi yexesha elizayo, eneebhaloti ezininzi zokuba yincasa ye-Ubuntu esemthethweni, kodwa ngalo ngoku sinolwazi oluncinci oluqinisekisiweyo. Oko sikufundayo malunga nokuba iya kuba yintoni incasa yesithoba yosapho lweCanonical esinokuyifunda kwiinethiwekhi zentlalo kwaye sicinge ukuba izinto ziya kuba njani kwikamva. Kukho izinto ezibonakala ngathi zicacile, kwaye enye yazo kukuba abaphuhlisi bencasa ka-Ubuntu "yeCinnamon" bafuna ukuba ngena kwindawo yokongeza, hayi ukuthabatha okanye ucime.
Ubuntu Cinnamon: Iindaba zeCanonical kwakamsinya, iindaba ngendalo esingqongileyo kamva
Ukuba sitshilo isikhombisi ku-Kubuntu kunye ne-KDE neon yile yeyiphi isoftware ebandakanya nganye, yintoni emva kofakelo olungenanto kwaye yintoni kwaye ihlaziywa nini. Sincede sifumane umbono wenye yeetweets zamva nje ezivela kwiakhawunti esemthethweni Ubuntu Cinnamon:
Ayilunganga! (ngendlela yeqhawe)@iqosweb Iqela leCinnamon liphethe ukunika iCinnamon kubasebenzisi beDebian kunye ne-Ubuntu. I-Linux Mint ayikho nje ukuba ibe yinto ekhethekileyo kwaye ine-software yayo kodwa ikwaphuhlisa iCinnamon, ngoko i-Linux Mint iya kuba neyokugqibela kwaye i-Ubuntu iya kuba mbalwa emva.
-Ubuntu Cinnamon (@UbuntuCinnamon) Septemba 23, 2019
Ayilunganga! (ngethoni ephezulu). Iqela leCinnamon Debian liphethe ukuhambisa iCinnamon kubasebenzisi beDebian kunye ne-Ubuntu. I-Linux Mint ayikho nje okhethekileyo nokuba nesoftware yayo, kodwa yokuphuhlisa iCinnamon. Ngenxa yoko, iLinux Mint iya kuba neyokugqibela kwaye Ubuntu buya kuba semva kancinci.
Ngokwam, ndicinga ukuba impendulo icacile kwaye ikhumbuza kakhulu le mpikiswano ingasentla ingekhoyo phakathi kweKubuntu ne-KDE neon:
Indawo yemizobo yeCinnamon iphuhliswa liqela leLinux Mint, ke zonke izinto ezintsha ze "Cinnamon" bume ziya kufikelela kwiLinux Mint Cinnamon ngaphambili kunayo nayiphi na enye inkqubo yokusebenza.
Iindaba zeCanonical ziya kufika ngaphambili kwi-Ubuntu Cinnamon kuneLinux Mint. Kwaye, nangona kwakungekho khetho, iLinux Mint isekwe kwiinguqulelo ze-LTS, ke, umzekelo, ukuba Ubuntu Cinnamon Remix iba yincasa esemthethweni ngo-Okthobha u-2020, siya kuba ne-Ubuntu Cinnamon 20.10 GAnimal ekujoliswe kuyo nayo yonke into entsha. Evela kwi-Canonical, kodwa I-Linux Mint iya kuhlala isekwe kwi-Ubuntu 20.04 kude kube ngu-Epreli 2022.
Nokuba ndonwabile na ngoKubuntu, ndicinga ukuba sijamelene neendaba ezibalulekileyo, ukufika kwecandelo elitsha kusapho lakwa-Ubuntu, ke kubonakala ngathi licebo elilungileyo ukulandela Iprojekthi yeakhawunti ye-Twitter kwaye ubanike uthando kunye nenkuthazo ebafaneleyo, awucingi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Iidesika » Ezinye iidesika » Ubudlelwane phakathi kwe-Ubuntu Cinnamon kunye neLinux Mint buya kufana nobukaKubuntu kunye ne-KDE neon
Andivumelani, ziyinkqubo enye yokusebenza okoko isiseko siyi-Ubuntu kwi-Linux mint, kubuntu, lubuntu, xubuntu, njl. Yintoni ebenza bahluke yindawo yemizobo kunye nokupakishwa kwayo kodwa isiseko yile nto kwaye bendinombono entlokweni yam ixesha elide, i-canonical kufuneka isungule i-Ubuntu distro okanye ibize i-X ekuvumela ukuba ukhethe incasa. kufakelo lwegraphical kwaye hayi, andithethi ngento encinci.iso enye ndithetha ngo-Ubuntu kufuneka inike ukujija nokudibanisa zonke iincasa kufakelo lwe-Ubuntu ukuze umsebenzisi wokugqibela akhethe ukuba afake ntoni.
Kodwa inkqubo yokusebenza yiyo yonke into. Isiseko sisiseko saso, kodwa yonke enye into oyikhankanyileyo iyayigqiba, okusingqongileyo, iipakeji, usetyenziso, njl.
I-beta yokuqala ye-VirtualBox 6.1 ibonisiwe
Aba ngabaphumeleleyo kukhuphiswano lwephepha lodonga Ubuntu 19.10 Eoan Ermine